“Quaratine ဝင်နေတဲ့ သူတွေအတွက် ပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေတာမျိုးတွေကို မပြုလုပ်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ သီရိရှင်းသန့်” - Cele Connections
သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ်မလေးသီရိရှင်းသန့်ကိုတော့Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..။ လက်ရှိမှာ သီရိရှင်းသန့် ပိုးတွေ့ရှိတဲ့ သူတွေ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးပွဲတစ်ခုကို တက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့် သံသယလူနာအနေနဲ့ ဆေးစစ်မှုကို ခံယူခဲ့ပြီး Negative အဖြေကို ရရှိခဲ့သူပါ..။ ဆေးစစ်အဖြေက Negative ဖြစ်နေပေမယ့် သူမကတော့ ဆက်လက် Quaratine ဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်..။ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အသိစိတ်နဲ့ ဆက်လက် ပြီး Quaratine ဝင်နေပေမယ့် မဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းတွေနဲ့ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုမှုတွေကြောင့် ခံစားနေရတဲ့ သူမရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဒီနေ့ ဧပြီလ (၂၀)ရက်နေ့မှာ “ဘယ်သူကရော ရောဂွ အကူးစက်ခံချင်မှာလဲ..??
အစစ်ဆေးခံတာ ဘာများမှာလို့လဲ..။ အိမ်မှာနေပြီး မသိသလို နေလို့ရတာပဲ.။ အဆဲမခံရအောင် …တွေ လူတွေ အပြစ်ပြောဖို့လောက်ပဲ..။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကရော အကူးစက်မခံနိုင်တော့ဘူးလား..။ ဒီရောဂါကို တိုက်ထုတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ Facebook Attack လုပ်ခံရလို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပြီး Build Up လုပ်နေရတယ်ဆိုတာ နားလည်စေချင်တယ်.။ မလိုလားအပ်တဲ့ အပြင်က Gossips တွေနဲ့ မဟုတ်မမှန်တဲ့ သတင်းတွေ သယ်မလာဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်..။ လူ့သဘာဝအရ စပ်စုတာ လက်ခံလို့ရပေမယ့် Privacy ချိုးဖောက်ပြီး Cyber Bullying တော့ မလုပ်ကြဖို့ ရန်အတွက် အားလုံးရဲ့ ကိုယ်စား မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်..။ ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းအတွက် ပြောတာ မဟုတ်ပါ..။ အားလုံ့းရဲ့ ကိုယ်စားပြောဆိုခြင်းပါ..။ Media တွေလည်း နာမည်ကြီးဖို့ တစ်ခုတည်းနဲ့ မဟတ်ုမမှန်တဲ့ သတင်းတွေ ရေးပြီး Media Ethic မရှိတာကို မြင်နေရတော့ အရမ်းကို စိတ်ပျက်မိတယ်.။ အချင်းချင်းဖေးမကြပါ..။
ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိကြပါ..။ သူ့နေရာမှာ ကိုယ်သာဆိုရင်ရော ဆိုတဲ့ အတွေးလေးတွေနဲ့ လူတိုင်းအပေါ် မေတ္တာထားနိုင်ကြပါစေ..။ ပုထုစဉ် လူသားးတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူတိုင်း အမှားမကင်းကြပါဘူး..။ အချင်းချင်းမေတ္တာထားနိုင်ကြပါစေ..။” ဆိုပြီး သူမရဲ့ မိုင်ဒေးမှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။ ကိုယ်တိုင် ပိုးတွေ့ရှိထားသူမဟုတ်ပေမယ့် ဆက်လက်ပြီးစိတ်ချရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်တဲ့အထိ Quaratineဝင်နေတဲ့သူတွေကို ပုတ်ခတ်ပြောဆိုတာမျိုးတွေကို မလုပ်ကြဖို့ သူမဘက်ကနေ မေတ္တာရပ်ခံလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီး..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ပိုးတွေ့ရှိသူတွေ မဟုတ်ပေမယ့် ဆက်လက်ပြီး အများအတွက် စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ Quaratine ဝင်နေတဲ့ သီရိရှင်းသန့်တို့အတွက် အားပေးစကားလေးတွေ ရေးပေးသွားကြပါဦးနော်..။
Source: Thri Shinn Thant’s Facebook
“Quaratine ဝငျနတေဲ့ သူတှအေတှကျ ပုတျခတျပွောဆိုနတောမြိုးတှကေို မပွုလုပျကွဖို့ မတ်ေတာရပျခံလိုကျတဲ့ သီရိရှငျးသနျ့”
သရုပျဆောငျ မျောဒယျမလေးသီရိရှငျးသနျ့ကိုတော့Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော..။ လကျရှိမှာ သီရိရှငျးသနျ့ ပိုးတှရှေိ့တဲ့ သူတှေ တကျရောကျခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးပှဲတဈခုကို တကျရောကျခဲ့တာကွောငျ့ သံသယလူနာအနနေဲ့ ဆေးစဈမှုကို ခံယူခဲ့ပွီး Negative အဖွကေို ရရှိခဲ့သူပါ..။ ဆေးစဈအဖွကေ Negative ဖွဈနပေမေယျ့ သူမကတော့ ဆကျလကျ Quaratine ဝငျနတောပဲဖွဈပါတယျ..။ သူမရဲ့ ကိုယျပိုငျ အသိစိတျနဲ့ ဆကျလကျ ပွီး Quaratine ဝငျနပေမေယျ့ မဟုတျမမှနျတဲ့သတငျးတှနေဲ့ ပုတျခတျပွောဆိုမှုတှကွေောငျ့ ခံစားနရေတဲ့ သူမရဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ဒီနေ့ ဧပွီလ (၂၀)ရကျနမှေ့ာ “ဘယျသူကရော ရောဂှ အကူးစကျခံခငျြမှာလဲ..??
အစဈဆေးခံတာ ဘာမြားမှာလို့လဲ..။ အိမျမှာနပွေီး မသိသလို နလေို့ရတာပဲ.။ အဆဲမခံရအောငျ …တှေ လူတှေ အပွဈပွောဖို့လောကျပဲ..။ ကိုယျကိုယျတိုငျကရော အကူးစကျမခံနိုငျတော့ဘူးလား..။ ဒီရောဂါကို တိုကျထုတျနတေဲ့ အခြိနျမှာ Facebook Attack လုပျခံရလို့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျပွီး Build Up လုပျနရေတယျဆိုတာ နားလညျစခေငျြတယျ.။ မလိုလားအပျတဲ့ အပွငျက Gossips တှနေဲ့ မဟုတျမမှနျတဲ့ သတငျးတှေ သယျမလာဖို့ မတ်ေတာရပျခံခငျြပါတယျ..။ လူ့သဘာဝအရ စပျစုတာ လကျခံလို့ရပမေယျ့ Privacy ခြိုးဖောကျပွီး Cyber Bullying တော့ မလုပျကွဖို့ ရနျအတှကျ အားလုံးရဲ့ ကိုယျစား မတ်ေတာရပျခံခငျြပါတယျ..။ ကိုယျ့တဈယောကျတညျးအတှကျ ပွောတာ မဟုတျပါ..။ အားလုံ့းရဲ့ ကိုယျစားပွောဆိုခွငျးပါ..။ Media တှလေညျး နာမညျကွီးဖို့ တဈခုတညျးနဲ့ မဟတျုမမှနျတဲ့ သတငျးတှေ ရေးပွီး Media Ethic မရှိတာကို မွငျနရေတော့ အရမျးကို စိတျပကျြမိတယျ.။ အခငျြးခငျြးဖေးမကွပါ..။
ကိုယျခငျြးစာတရားရှိကွပါ..။ သူ့နရောမှာ ကိုယျသာဆိုရငျရော ဆိုတဲ့ အတှေးလေးတှနေဲ့ လူတိုငျးအပျေါ မတ်ေတာထားနိုငျကွပါစေ..။ ပုထုစဉျ လူသားးတှေ ဖွဈတဲ့အတှကျ လူတိုငျး အမှားမကငျးကွပါဘူး..။ အခငျြးခငျြးမတ်ေတာထားနိုငျကွပါစေ..။” ဆိုပွီး သူမရဲ့ မိုငျဒေးမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။ ကိုယျတိုငျ ပိုးတှရှေိ့ထားသူမဟုတျပမေယျ့ ဆကျလကျပွီးစိတျခရြတဲ့ အခွအေနဖွေဈတဲ့အထိ Quaratineဝငျနတေဲ့သူတှကေို ပုတျခတျပွောဆိုတာမြိုးတှကေို မလုပျကွဖို့ သူမဘကျကနေ မတ်ေတာရပျခံလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော ပရိသတျကွီး..။ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ပိုးတှရှေိ့သူတှေ မဟုတျပမေယျ့ ဆကျလကျပွီး အမြားအတှကျ စိတျပငျပနျးမှုတှနေဲ့ Quaratine ဝငျနတေဲ့ သီရိရှငျးသနျ့တို့အတှကျ အားပေးစကားလေးတှေ ရေးပေးသှားကွပါဦးနျော..။
“အချစ်ဖွဲ့လေညင်းဇာတ်ကားထဲက ကာရိုက်တာပီပြင်​အောင်ရိုက်ကူးရင်း ​ပေါင်ချိန်(၁၅)ပေါင်ထိတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ ခင်သဇင်”
“ပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့ သူမရဲ့ အားနည်းချက်လေးကို ဝမ်းနည်းစွာ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ မြတ်သူသူရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်”